Izicinezeli ezincinci zomphunga (iiAuto ezizenzekelayo) Ifektri | Abavelisi kunye nabaxhasi base China
Isitayile setafile MOST-T (18L-80L)
I-MOST-T luhlobo lwe-sterilizer yetafile ekhawulezayo, ekhuselekileyo neyoqoqosho. Kuqhelekile ukuba kusetyenziswe isebe le-stomatological, isebe le-ophthalmological, igumbi lokusebenza kunye ne-CSSD ukwenza inzalo ngesixhobo esisongelweyo okanye esingavalwanga, ilaphu, u-Hollow A, uHollow B, ulwelo lwenkcubeko, ulwelo olungatywinwanga, njl.
Uyilo luhlangabezana nezikhokelo ezifanelekileyo ze-CE (ezinje nge-MDD 93/42 / EEC kunye ne-PED 97/23 / EEC) kunye nemigangatho ebalulekileyo efana ne-EN13060.
Semi-Autoclave nkqo Uhlobo Autoclaves LMQ.C (Semi-oluzenzekelayo, 50L-80L)
Uthotho lwe-LMQ.C yenye yezithinteli ezime nkqo. Kuthatha umphunga njengesixhobo sokuvala inzalo esikhuselekileyo nesoqoqosho. Ziqhelekile ukuba zisetyenziswe kwisibhedlele esincinci, iklinikhi, iziko lokhathalelo lwempilo, elebhu ukwenza inzalo ngelaphu, izitya, izixhobo zenkcubeko, ulwelo olungatywinwanga, irabha, njl njl. umgangatho.
Uhlobo oluzenzekelayo nkqo Autoclaves LMQ.C (oluzenzekelayo, 50L-100L)
Uthotho lwe-LMQ.C yenye yezithinteli ezime nkqo. Kuthatha umphunga njengesixhobo sokuvala inzalo esikhuselekileyo nesoqoqosho. Ziqhelekile ukuba zisetyenziswe kwisibhedlele esincinci, iklinikhi, iziko lokhathalelo lwempilo, elebhu ukwenza inzalo ngelaphu, izitya, indawo yenkcubeko, ulwelo olungatywinwanga, irabha, njl njl. Uyilo lwezivumelwano zamagumbi kunye ne-GB1502011, GB8599-2008, CE kunye ne-EN285 umgangatho.